कपिलवस्तुमा गोली चलियो समाजबादी पार्टीका नेता माथि « Khabar24Nepal
कपिलवस्तुमा गोली चलियो समाजबादी पार्टीका नेता माथि
खबर 24 नेपाल ५. नम्बर ब्युरो
साउन १६, कपिलवस्तु । बिहिबार कपिलवस्तुको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित शुद्धोधन गाउँपालिकामा स्थानीय एक नेता माथि गोली प्रहार भएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं ३ सुसरीया पूल निर विहीबार दिउँसो २ बजेको समयमा स्थानीय समाजबादी पार्टीका नेता माथि गोली प्रहार भएको बताइएको छ ।
स्थानीय रामनयन यादवमाथि गोली प्रहार भएको हो । यादव पूर्व नयाँ शक्ति पार्टीबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेद्वार समेत हुन् । उनी हाल समाजबादी पार्टीमा छन् । गाउँपालिकाको वडा नं. ५ देवपुर स्थायी घर भएका यादव जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवा आउँदै थिए । उक्त मौका छोपेर मोटरसाइकलमा सवार दुई जना अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी गरेको हो । गोली लागेर यादव घाइते भएका छन् । उनको अहिले तौलिहवामा उपचार भैरहेको बताइएको छ । स्थानीयका अनुसार उनको देब्रो पाखुरामा गोली लागेको छ । दिउँसो २ बजे गोली हान्ने अज्ञात समूहलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था भएपनि पक्राउ गर्न नचाहेको भन्दै स्थानीय आक्रोसित भएका छन् ।
घटनाको थप विवरण आउँन बाँकी छ । यसभन्दा अगाडी यही शुद्धोधन गाउँपालिकाका दीपेन्द्र चौधरी (राजाबावु) को गोली हानी हत्या भएको थियो । राजा बाबू नेकपाका नेता थिए l यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी प्रमुख एसपी दिप समसेर रानाले घाइतेहरुको आफ्न्तले ४ जनाको नाम सहित जाहेरी दिएकोले अनुसन्धान गरेर कार्वाही अघि बढाउने बताएका छ्न ।
नुवाकोटमा एकजनामा कोरोना संक्रमण
मन्त्रिपरिषद् निर्णय : एक साताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट आवागमन स्थगित
बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट एकको मृत्यु